विद्यार्थी आफैँले छान्नुपर्छ कलेज र विषय - Naya Patrika
विद्यार्थी आफैँले छान्नुपर्छ कलेज र विषय
कस्ता कलेज छान्ने ?
कलेजको वर्गीकरण पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । आइएसओ सटिफाइ हो–होइन ? विश्वको वर्गीकरण, विश्वविद्यालयको वर्गीकरण, कलेजस्तरका कति कोर्स सञ्चालन गरेको छ ? त्यहाँबाट निस्किएका विद्यार्थीको अवस्था के छ ? त्यहाँ पढेर निस्किएकामध्ये कति जनशक्तिले रोजगारी पाए ? अगाडि पढेका विद्यार्थी र परिवार सन्तुष्ट छन् वा छैनन् ? यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
रमेशकुमार सिलवाल हिसानका अध्यक्ष हुन् ।